Loreley Archive - Zon'olombelona & Zavakanto maivana nosoratan'i ∴ PixelHELPER Foundation
Ny fanangonan'ny olom-pirenena mba hamonjy ny tobim-pitsaboana Loreley amin'ny alàlan'ny proxy
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 17. Janoary 2012
Ity manaraka ity dia ohatra voalohany amin'ny ady amin'ny demokrasia mivantana amin'ny alàlan'ny fitsapan-kevi-bahoaka. Raha tokony handinika ny foto-kevitry ny mpikirakira izahay, ny mpanao politika dia nanohitra ny fangatahan'ny olom-pirenena amin'ny fantsona rehetra, izay mampiseho antsika fa eo amin'ny làlana marina isika. Raha mbola tsy misy fanapaha-kevitry ny fitsarana, dia tsy azo ekena ny fangatahan'ny olompirenena amin'ny alalàn'ny §17 ao amin'ny kaody monisipaly. Ankehitriny, na dia ny Gazety ofisialy aza, diso tafahoatra ho an'ny fananganana toe-po. Nangataka fampandrenesana mpifanandrina izahay izao.
Ireo mpanao politika te-hanidy ny Hopitaly Loreley dia miasa amin'ny fomba fanalam-baraka izay ampiasaina amin'ny fanjakana tsy refesi-mandidy ihany. Niakatra fitsarana ny tanàna sy ny fikambanana ary ny heviny dia atolotra ny olom-pirenena toy ny fitsarana fitsarana fitantanana. Ny olom-pirenena sasany dia niantso tolotra tamin'ny fihetsiketsehana ny hetsika ananan'ireo olom-pirenena taloha "Ho fitsinjovana ny toeram-pitsaboana Loreley", ny orinasa tsirairay dia nanome vola mitentina 10.000 0 XNUMX ho an'ny fikambanana mpanohana ny hopitaly. Nahazo mari-pankasitrahana XNUMX € izahay ary ny fangatahan'ny olom-pirenena dia voatsikera noho ny fanoloran-kevitra momba an'i Mehr Demokratie e. Nanoratra ny laharan'ny kaonty fanomezana ho antsika eo amin'ny taratasy i V.
Ny tombontsoa farany hamonjy ny ivontoerana Loreley dia fangatahan'ny olom-pirenena any amin'ireo tanànan'ny mpiara-miasa tsirairay. Izay manana ny toeram-ponenany voalohany ao amin'ny tanàna tsirairay ary mihoatra ny 3 taona no afaka misoratra anarana. Azafady zaraina be any amin'ny faritra misy anao ireo antontan-taratasy.
Mandehana ambany mba hisafidy eo amin'ny vondron'olona Oberwesel, St.Goar & ny Hunsrück-Mittelrhein.
Miaraka amin'ny foto-kevitra opérations vaovao an'ny PixelHELPER Foundation, dia mitarika ny klinika Loreley ho amin'ny hoavy azo antoka izahay!
Fangatahan'ny olom-pirenena ho an'ny tanànan'i Oberwesel
Kitiho ny sary raha te-hisintona ny lisitry ny sonia. Tokony haparitina foana miaraka amin'ny foto-kevitra manara-penitra izany.
Fangatahan'ny olompirenena ho an'ny tanànan'i Sankt Goar
Ny fanangonan'ny olom-pirenena ho an'ny vondron'olona Hunsrück-Mittelrhein
Tehirizo ny klinika Loreley. Ny GxelH Foundation tsy tombony PixelHELPER dia te hitondra ny hopitaly ary manohy azy io ho vahaolana 1-trano. Fiantohana maivana ao amin'ny minisiteran'ny fahasalamana any Berlin
Zava-misy ankehitriny 20.04.2020/21/15 XNUMX:XNUMX
Amin'izao kompania izao ny volana aprily 2020 amin'ny CDU Oberwesel dia misy zavatra ratsy lazaina, izany hoe ny toeram-pitsaboana dia tsy hahazo tombony.
Ny Krankenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel, araka ny hevitry ny anarana dia GmbH ary tsy tombony tsy GmbH. Soavaly ihany ny hetra sasany fa tsy hahazoana tombony. Raha fintinina, tokony ho marihina fa fanesorana amin'ny hetra ara-barotra, ny
Ny hetra sy ny hetra momba ny varotra dia omena ny hopitaly rehetra mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny § 67 AO. Tsy mampaninona izany na tsia ny hopitaly. Ny fanafoanana ny hetra amin'ny orinasa ihany no omena ny hopitaly izay tsy mahazo tombony azo atao amin'ny dikan'ny §§ 51-68 AO. Amin'izao fotoana izao dia GmbH izany ka misy ny mety rehetra hisintomana vola. Nakatona ny departemanta ary nivezivezy tany amin'ny hopitaly hafa ny teknolojia. Azo atao ny fiovam-po ho GmbH tsy tombony. Ampio amin'ny fangatahan'ny olom-pirenena hanohizana ny asa tsy misy tombony amin'ireo klinika facebook.com/loreley-klinik miaraka amina orinasa tsy miankina azo antoka, betsaka ny famatsiam-bola azo noho ny rafitra orinasa tompon'andraikitra voafetra, tsy mahazo mandeha intsony ny tombom-barotra, fa tsy maintsy ampiasaina ho an'ny tanjona tsy azo antoka amin'ny hopitaly tsy misy tombony. Eto amintsika dia ny toeram-pitsaboana ihany, ny foibe zokiolona sy ny atrikasa vaovao ho an'ireo olona sembana ao amin'ilay toerana taloha tao amin'ny Sankt Goar. Raha mila fanazavana fanampiny, midira fotsiny eto amin'ity pejy ity.
Zava-misy ankehitriny 19.04.2020/13/00 XNUMX:XNUMX
Izahay dia mametraka ny fangatahana telo avy amin'ny olom-pirenena ao an-tanànan'ny mpandray anjara mba hahazoana antoka fa ny fivoriana iray "mpana-tsindran-tsoavaly vaovao" nangataka an'i Marienhaus Holding GmbH hamindra ny 55% ny tsatòka azy any amin'ny hopitaly any amin'ny PixelHELPER Foundation tsy tombony amin'ny GmbH, sahala amin'ny nanoloranao ny Vokovoko Mena.
Ankoatr'izay, ny hopitaly dia havadika amin'ny orin'asa tsy hahazo tombony mba hitazomana ny tombom-barotra rehetra ao amin'ny orinasa fa tsy hanao fizarana ho an'ny mpiady. Mba hanaovana izany dia mila manangona sonia 300 eo ho eo amin'ny mpifidy isaky ny mpiara-miasa amin'io toerana io isika, raha tsy mifanaraka amin'ny fangatahan'ny olom-pirenena ny mpitantana ny tanàna, dia misy ny fanapahan-kevitry ny olom-pirenena.
Ny PixelHELPER Foundation tsy tombony GmbH dia namolavola hevitra ary nanolotra ny fikojakojana sy fanohizana ny toeram-pitsaboana ao Oberwesel. Ireo tolotra manana fifantohana manokana amin'ny fampidirana dia tokony hatsangana ao amin'ny toerana Sankt Goar. Tafiditra ao anatin'izany ny endrika fivezivezena vaovao ho an'ny olona 8-16 ary koa atrikasa fampifandraisana ho an'ny olona manana fahasembanana.
Ny hopitaly ao Oberwesel dia tokony hamerina hamerina ny departemanta hafa rehetra ilaina ihany koa toy ny vondrona fikarakarana mafimafy mba ahafahana miasa toy ny hopitaly feno.
Ho fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa amin'ny University of Marburg sy ny orinasa teknolojia akaiky azy, ny atrikasa ho an'ny sembana dia hamokatra singa mifono hazo sy voamarina fa ilaina hanondrana any Afrika.
Ho an'ny fananganana atrikasa vaovao ho an'ny sembana, anisan'izany ny fiainana tsy misy sakana, ny famatsiam-bola hatramin'ny EUR 600.000 dia tokony hampiharina avy amin'ny Aktion Mensch.
Ny PixelHELPER Foundation dia te hampiseho amin'ny fomba mahery vaika ny fomba takian'ny fiaraha-monina antitra amin'ny fomba maoderina sy manara-penitra ao amin'ny firenena.
Mba hahazoana antoka ny filaminana ara-bola, ny PixelHELPER Foundation dia hifantoka amin'ny fanokafana ireo faritra tombony vaovao mba hahazoana antoka ny fitohizan'ny toeram-pitsaboana tsy mahasoa.Manantenainay ihany koa ny famatsiam-bola avy amin'ny tahirim-pitsaboana hôpitaly hanohy ny fandidiana ny toeram-pitsaboana sy ny hanitatra.
Eto, ny Pixelhelper Foundation, amin'ny alàlan'ireo mpanohana azy, dia mety hianjera amin'ilay tambajotra malaza amin'ny politikam-pahasalamana alemana.
Satria ny orinasam-bola voafetra tsy mahazo tombony tsy manenjika ny tombotsoany manokana, tsy misy fizarana tombom-barotra omena ny mpandray anjara, dia manome vola bebe kokoa izahay any amin'ny klinika sy ilay atrikasa voatanisa.
Ny fifantohana hopitaly tsy misy tombony no ifantohany matetika - mitovy hevitra amin'ny mahasoa ny marary tsirairay. Ny teny hoe "tsy mitady tombony" dia mifandraika amin'ny lalànan'ny hetra, satria ny hetsika voatanisa ao amin'ny paragrafy faha-52 amin'ny fehezan-dalàna hetra izay an'ny besinimaro dia heverina ho tsy tombony amin'ny dikan'ny lalàna momba ny hetra - ohatra, dia mahakasika ny famatsiam-bola amin'ny sehatry ny fahasalamana. , Ho valin'izay dia adidin'ny gGmbH ihany no ampiasana vola ho an'ny tsy tombony azo antoka.
Noho izany dia te-ho tonga toeram-pitsaboana tsy manam-pahaizana momba ny tombom-barotra izahay - ary mihetsika mifanaraka amin'izany. Io dia ahafahantsika mizaka, izay mahasoa ny marary ihany koa. Satria tsy hoe miasa amin'ny fomba tena ilaina ihany isika avy eo, fa amin'ny fitsipiky ny maha-olona, ​​ny fitsipi-pinoana ary ara-toekarena - izany dia midika hoe te hampiasa ny fanananay ara-bola sy ny olombelona rehetra ho tombontsoan'ny marary.
Latina: Ny PixelHELPER Foundation dia natsangan'ny Freemances maro ary ny mpanakanto hazavana Oliver Bienkowski. Any Hamburg dia misy ny Hopitaly Masonic any Rissen, izay tantanan'ny Vokovoko Mena ary koa ny trano fanodinana Mason any antenantenan'i Hamburg. Ny Hopitaly Freemason tao Hamburg dia nanokatra ny varavarany tamin'ny 3 Oktobra 1795 tao Dammtorwall ho toy ny andrim-panjakana voalohany amin'ny fanekena ny marary, izay tsy ampy tao Hamburg taloha. Natsangana ho hopitaly ho an'ny mpanompon'ny vehivavy izy io am-boalohany ary nanitatra taona vitsivitsy taty aoriana ho an'ny ankizilahy lahy.Rehefa rava ny PixelHELPER Foundation dia nandeha tany amin'ny Freimaurer Hilfswerk eV, izay ampahany amin'ny fikambanana mpanao asa soa.
Zava-misy ankehitriny 16.04.2020/12/00 XNUMX:XNUMX
Izahay dia eo am-pitadiavana trano hofan-trano ao afovoan-tanànan'i Oberwesel. Izahay dia hampiasa ny toerana handrindrana ny fangatahan'ny olom-pirenena 3 mba hitazonana ny hopitaly sy hamokatra mofo am-bifotsy ho an'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana sy ireo tsy manan-kialofana. Raha vantany vao hita ny toerana, azo alaina ao amin'ity pejy ity ny lisitry ny sonia ho an'ny tanàna 3 rehetra. Aorian'ny fanangonana ireo sonia, azonao atao ny manolotra lisitr'ireo fangatahana ny olom-pirenena any aminay eto amin'ny tranokala. Natomboka ny voalohan'ny 01 may 2020 ny fanangonan-tsonia ny olom-pirenena
Zava-misy ankehitriny 14.04.2020/12/00 XNUMX:XNUMX
Hitantsika amin'ny tsy fahitana ny fividianana ny tolotra nividianantsika an'i Marienhaus Holding fitaka mazava an'ireo mpiantsena hafa. Nifandray tamin'ny mpisolovava lalàna iray tao Koblenz sy ny fikambanana Mehr Demokratie eV ny Fikambanana PixelHELPER Foundation Gemeinnützige GmbH mba hamerenana ny fangatahan'ny olom-pirenena hanombohana "Fihaonambe faobe tsy manam-paharoa mba hampiala ny vahaolana amin'ny 09.04.2020 aprily 1". Ny fametrahana ny fangatahan'ny olom-pirenena dia vonona, fa tsy maintsy hojerena ara-dalàna. Ny fangatahan'ny olom-pirenena dia manery ny mpitantana ny tanàna handray fanapahan-kevitra amin'ny fivoriana ankapobeny tsy mahazatra. Mpisolovava iray manam-pahaizana momba ny lalàna momba ny orinasa dia mandinika ireo fepetra mifehy ny fifaninanana. Amin'ny fivoriana ataon'ny mpandray anjara miavaka dia afaka atolotra ao amin'ny PixelHELPER Foundation gGmbH, ary ny tohin'ny trano XNUMX hafa any Oberwesel dia azo tohizana, toy ny fametrahana ny foibe zokiolona.
Na dia nandefa ny valin-teninay ho an'ny mpitondra tenin'ny orinasa ho an'ny Marienhaus Holding indroa amin'ny alàlan'ny mailaka aza izahay, tsy nisy valiny momba ny tolotra anananay afa-tsy ny antso an-telefaona avy amin'ny Heribert Frieling.
Toeram-pitsaboana ilaina amin'ny Oberwesel ny Hopitaly Loreley & Centre Senior. Nandritra ny fivorian'ny mpiasan'ny mpandray anjara tamin'ny 09.04.2020 aprily XNUMX, dia tsy namaly izany i Marienhaus GmbH, na dia nisy ihany aza ny tolotra avy amin'ny GmbH tsy tombony azo amin'ny PixelHELPER Foundation, ary ny fandinihana rehetra dia nandà fa ny tolotra fanampiny dia misy. Hitanay ny fandikan-dalàna momba ny hosoka amin'ny fitaka. Ny Marienhaus dia mamindra ny paikady ho an'ny hopitaly hafa, ary amin'ny farany dia te-hahazo ilay antitra ho an'ny zokiolona ho toy ny ombam-bola izy. Ny olona miasa tena izay manao zavatra toy izany any Alemaina dia mamita ny zava-misy amin'ny fandikan-dalàna amin'ny banky. Na iza na iza mamindra ny paik'ady, i.e. Ny fananan'ny hôpitaly, amin'ny fitrandrahana mihoa-bidy dia azo saziana. Novonoin'i Marienhaus GmbH tany amin'ny hopitaly hafa toa an'i Bingen ny hopitaly. Tianinay ny mpivarotra rehetra hangataka an'i Marienhaus GmbH avy ao amin'ny orinasa hopitaly St. Goar Oberwesel GmbH. Amin'ny maha GmbH tsy tombony dia ny PixelHELPER Foundation dia tsy hanao fizarana tombom-barotra, fa hitarika ny foibe sy hopitaly zokiolona ho amin'ny tanjona tsy mitady tombony.
Halefa eo no ho eo ny fandraisana vola. Ampy ho anao ny takelaka famindranao vola ho an'ny takelaka fanomezana ho an'ny biraon'ny hetra hatramin'ny € 250.
Miaraka amin'ny vinavina maivana amin'izany Ministeran'ny fahasalamana federalyt ny PixelHELPER Foundation dia mivadika ho fanakatonan'ny St. Goar / Oberwesel. Ny soso-kevitray: ny GmbH PixelHELPER Foundation dia tsy mahazo tombony raha maka ny anjara 55% raha toa ka ny Minisiteran'ny Fahasalamana Rhineland Palatinate avy amin'ny tahirim-bolan'ny hopitaly, izay efa natao mialoha ny fandoavam-bola, ho an'ny karaman'ny mpiasa, ny fitohizan'ny asa sy ny fanitarana ny hopitaly, izay hanome an'i PixelHELPER ny hanavaozana ny toeram-pitsaboana sy ny fitazonana ny mpiasa rehetra ao amin'ny hopitaly Oberwesel mandritra ny 1 taona. Ilay trano ao St. Goar dia ampiasaina amin'ny fananganana milina fanamafisana ho an'ny tontolo fahatelo. Tsy ho ela ny University of Marburg dia hanolotra fitaovana fanamafisam-peo kely ho an'ny Afrika ho an'ny vahoaka. Miaraka amin'ny fitaovana vita amin'ny hazo sy ny ampahany tsotra avy amin'ny fivarotana entana, dia afaka manangana ihany koa ireo mpanamboatra ventilateur ho an'ny firenena tsy manana rafitra hopitaly miasa ankehitriny. Ankoatr'izay, ny PixelHELPER Foundation miaraka amina biraon'ny hetsika ao amin'ny Hopitaly St. Manamboara fanasoavana fiantrana hafa toy ny mofo fitoeran-mofo amin'ny fikarakarana ara-tsakafo bebe kokoa ny Goar, hikarakara festival ara-jiro maivana ary hanao dingana fanampiny hanohanana ny olon'ny St.Goar & Oberwesel. Ho avy ny valanaretina manaraka, talohan'ny Ady mangatsiaka dia hopitaly 40 mahery any Alemaina no nikatona noho ny fitahirizana. Amin'ny fotoanan'ny areti-mifindra dia tsy afaka manidy hôpitaly maro kokoa isika. Ny valintenin'i Jens Spahn nateraky ny mailaka, nanondro ny ministeran'ny fahasalamana tao Rhineland-Palatinate. Ny mpanao politika no tsy maintsy mihetsika haingana izao. Ny faha-22 Fanampiana an-tapitrisany maro no tsy maintsy navotsotra ho an'ny fandidiana mitohy sy ny karama ao amin'ny hopitaly ary miaraka amina orinasa mpandraharaha vaovao tsy mitady tombony dia tsy maintsy farafaharatsiny mitondra ny hopitaly any amin'ny mainty mainty ao anatin'ny taona vitsivitsy, satria raha ny mifanohitra amin'i Marienhaus GmbH, ny GmbH tsy mahazo tombony dia tsy mila mamokatra vola. Ity dia fomba mety hitranga farafaharatsiny hanokafana indray ny hopitaly any Oberwesel amin'ny fandidiana ny hopitaly mahazatra. Miangavy ny Minisiteran'ny fahasalamana RLP izahay mba hamoaka ny vola amin'ny vola struktural, hamindrana ny fizarana any amin'ny PixelHELPER Foundation mankany Marienhaus GmbH ary hamonjy ny mpiasa amin'ny Hopitaly Oberwesel. Ka amin'ny hoavy afaka miasa ny hopitaly sy ny tranon'ny olona taloha izahay mba hikarakarana tsara. Ny governemantan'i Rhineland-Palatinate dia voatery manao hopitaly any Oberwesel miaraka amin'ny fijerena ireo mpizahatany mitsidika an'i Moyen Orient, manantena izahay fa homen'ny mpanao politika. Ny tolotra fividianana amin'ny alàlan'ny mailaka ho an'ny mpitondra tenin'ny orinasa Frieling an'i Marienhaus GmbH dia tsy mbola voavaly. Saingy ataontsika fa sahala amin'ny alàlan'ny Lakroa Mena Alemanina, izay natolotra ny tsatòka 55%, i Marienhaus GmbH koa dia manolotra ny tsatokatoky ny 55% ho an'ny euro iray. Raha tsy mandeha ny fahazoana ny fizarana, dia farafaharatsiny mba hanakanana ny fanakatonana hopitaly tsy misy dikany.
Ny fanangonan'ny olom-pirenena mba hamonjy ny tobim-pitsaboana Loreley amin'ny alàlan'ny proxy Aogositra 13th, 2020Oliver Bienkowski